Xarigga firaaqada ah ee yurubiyanka ah ee loo yaqaan 'alwaaxa' makhaayadaha kafateeriyada ayaa banaanka loo dhigay, Alaabooyinka Dibadda ee Shiinaha laga helo TopChinaSupplier.com
Soo-saare Hoyga Internetka alaabta guriga Dhar Dibadda ah Nashqadeynta dharka firaaqada ah ee dharka casriga ah ee reer Yurub ayaa bannaanka loo saaray
dejiyo 10 US $ 134.20 / Set
Xarkaha xargaha beerta waxaa loogu talagalay qaab fudud oo leh xarig iyo anigatal base. Sawiro fudud oo banaanka ah oo fadhida fadhigatal base ”waxay ku habboon tahay qolalka fadhiga bannaanka ee loogu talagalay qaabka ugu yar. Qaybaha fadhiga waa aniga anigatal. Biyuhu waa biyuhu inay kordhiyaan nolosha alaabta guriga. Kuraasta gadaashiisa waxaa laga sameeyay aluminium budo ah ffinanka iyo xargaha ayaa ka dhigaya midnimada fadhiga. Barkimooyinka jilicsan iyo barkimadu waxay ka samaysan yihiin caruusado caruusado iyo dhar u adkaysanaya biyaha… Taasina waxay ka dhigeysaa qalabkani inuusan noqon only awood u leh inay iska caabiyaan cimilada darankadhigid laakiin waliba waxay fududahay in la nadiifiyo. iyo ilaalinta. A professioqolka fadhiga ee guriga banaanka ah si fudud ayaa looga dhex dhisi karaa beertaada.
magaca Product Nashqadeynta dharka firaaqada ah ee dharka casriga ah ee reer Yurub ayaa bannaanka loo saaray
tirada Model TF-403C & TF-403T
Waxyaabaha Aluminium ffiriiric iyo xadhig dibadeed